किन नाङ्गिइन् पुनम पाण्डे ? (फोटो फिचरसहित) - Enepalese.com
किन नाङ्गिइन् पुनम पाण्डे ? (फोटो फिचरसहित)
इनेप्लिज २०७२ असोज २९ गते २१:५९ मा प्रकाशित
मुम्बई । उत्तेजक र नग्न तस्वीर सार्वजनिक गरेर चर्चामा छाइरहने बलिउडकी हट नायिका पूनम पाण्डेले एक अनौठो राज खोलेकी छिन् ।
उनले आफू नाङ्गिनुको कारण खुलाएकी हुन् । त्यती मात्रै होइन् अब उनी ग्ल्यामर र सेक्सका कुराबाट टाढा जान चाहन्छिन् । उनले गरेको खुलासा अनुसार आजसम्म उनले गरेका सबै सेक्सका कुराहरु र नग्न फोटो सार्वजनिक चर्चाका लागि मात्रै थिए ।
उनले भारतीय टिमले विश्वकप जितेको खण्डमा म नाङ्गो हुन्छु भन्ने जुन कुरा थियो, यो मैले सोचेर नै बताएकी थिएँ ।’ उनले यो बिषयमा आफूले पपुलर हुनका लागि चर्चा गरेको बताईन् ।
पूनमले सेक्सी भनेर चर्चामा आउन जवानीमा जो कोहीलाई पनि रहर लाग्ने भन्दै तर, अब आफू सेक्सीसँगै राम्री अभिनेत्री पनि बन्ने योजनामा रहेको सुनाईन् ।